Archive du 20170401
Fifidianana 2018 Ireo kandida be vola
Samy miketrika mafy ireo heverina ho kandida amin�ny taona 2018. Ao ny mpanao politika ary ao ny mpandraharaha.
Praiminisitra Mahafaly Olivier Namono afo tany Port Berg�
Nitokana fotodrafitrasa tany amin�ny faritra Sofia, distrikan�i Port Berg� sy Port Berg� 2 sy tao amin�ny kaominina Tsarahasina ny praiminisitra lehiben�ny governemanta,
Raharaha 29 martsa Nahatonga ny fahaleovantena tsy azo, hoy ny Otrikafo
Miteraka resabe isan-taona ny fankalazana ny datin�ny 29 martsa 1947 izay vao notsaroana 3 andro lasa izay.
Andriampotsy distrikan�i Fenoarivobe Manampatra fahefana ny ben�ny tan�na HVM
Manararao-pahefana ary mampiasa ny toerana azony hanaovana valifaty ny ben�ny tan�nan�ny kaominina Andriampotsy, distrika Fenoarivobe, Faritr�i Bongolava.
Rafitra federalisma Tena vahaolana tokoa ve ?
Hentitra ny fanehoan-kevitr�ireo mpikamban�ny filankevitra momba ny fampihavanam-pirenena (CRN) mikasika ny raharaham-pirenena, indrindra fa ny fifidianana.
Mahajanga sy Toamasina Naato amin�ny asany ny Ben�ny tan�na
Tsy mitsaha-miitatra ny fanilihana ireo Ben�ny tan�na tsy miara-dia amin�ny fitondrana. Lasibatra koa izao ny Ben�ny tan�nan�i Mahajanga, Andriatomanga Mokhtar Salim.
Sikidy mila voatsiary !
Manahoana izy ao ry Jean a ! Ahoana mihitsy ity revinareo ity e ? Dia tena foroninareo daholo izao atsanga tsy aman�orana izao rehefa te hiala bala inareo.
Zandarimariam-pirenena Hiezaka ny ho filamatra
Hanamarika ny andron�ny zandarimariam-pirenena ny zandary Malagasy rahampitso alahady 2 aprily.
Dr Rakotomaharo Tsinjo Nanohitra ny hizarazarana an�Antananarivo
Misaona ny kaominina Antananarivo Renivohitra noho ny fahalasanan�ny filohan�ny sedinkan�ny mpiasan�ny kaominina, dokotera Rakotomaharo Tsinjo.
HERISETRA AO AN-TOKANTRANO Mamono vady ny 60%-n�ny lehilahy
Ny 60%-n�ny lehilahy no fantatra fa manao herisetra amin�ny vadiny eto an-drenivohitra.
Angano sy arira
Fihetseham-po marolafy, ao ny fitserana, ao anefa ny fahasorenana.
Aretina Hepatite B Mahazo ny 20%-n�ny Malagasy
Nampahafantarin�ny tompon�andraikitra voalohany mikasika ny areti-mifindra eo anivon�ny hopitaly Befelatanana tetsy amin�ny Kudeta Anosy omaly fa mahatratra hatrany amin�ny 20%-n�ny Malagasy amin�izao fotoana izao no voan�ny aretina Hepatite B.
ANDOHARANOFOTSY Tonga nitsirika ny asa fanamboaran-dalana ny Ben�ny tan�na
Tonga nitsirika sy nanara-maso ny asa fanamboaran-dalana vatsian�ny minisiteran�ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ao Ambohimanala sy Ankadiefajoro izay mampitohy ny fokontany Morarano sy Ambohimanala omaly ny Ben�ny tan�na ao an-toerana Ranirison Hasina Nirin�ny Aina.
SEKOLY AMBONY ESPIC Manampy ireo tsy manana Baka, manome diplaoma ireo te-hiakatra sokajy amin�ny asam-panjakana
Anisan�ny sekoly ambony iray manana ny maha izy azy eto an-drenivohitra ny ESPIC ( Ecole Superieur Professionnel en Informatique et Commerce), manana ny foiben-toerany etsy 67 ha Avaratra Andrefana.